Lalàna Vaovao Momba Ny Heloka An-tserasera Ao Palestina, Hanokatra Làlana Vaovao Ho An’ny Fanitsakitsahana Zo Va Re? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2017 12:35 GMT
Sary nataon'i 7iber (CC BY-NC-ND 2.0)
Anaty kiafinafina tanteraka sy tsy misy mangarahara, vao haingana ny filoha Palestiniàna Mahmoud Abbas no nankatò ny lalàna iray vaovao hiadiana amin'ny heloka an-tserasera, izay hanamafy bebe kokoa ny fangejàna ny fahalalahan'ireo Palestiniàna haneho hevitra ary ny fiainana manokana ety anaty aterineto.
Samy namely ilay lalàna vaovao daholo na ny media palestiniàna na ireo fikambanana sivily, ka avy hatrany dia niantso ny hampiatoana azy io mandra-pisian'ny adihevitra iraisan'ny rehetra sy fanitsiana atao aminy. Ny Sendikàn'ireo Palestiniàna Mpanao Gazety, ny Kaomity Tsy Miankina Mpiaro Zon'Olombelona ary ny Ivontoerana Palestiniàna ho Fampandrosoana sy Fanalalahana ny Asa an-Gazety, ankoatra ireo maro hafa, no nanohitra ilay fankatoavana an'io lalàna vaovao io noho izy io tafiditra be amin'ny fanohintohinana ny fahalalahana sivily sy politikan'ny Palestiniàna.
Nokarakaraina tany amin'ny miafina tany ilay lalàna ary nankatoavina tamin'ny 24 Jona 2017 tsy nanaovana fakàna hevitra mialoha tany amin'ny fiarahamonim-pirenena Palestiniàna sy ireo mpanome tolotra aterineto. Herinandro roa taty aoriana dia navoaka sy natao ho manankery avy hatrany araka izay voalaza ao amin'ny Andininy faha-61 amin'ilay lalàna, nanafoana toy ny tsy nisy ilay fanomezana 30 andro efa nomen'ny lalàna hatrizay alohan'ny hidiran'ny lalàna iray vaovao hanan-kery. Hatramin'ny 2007 nanakatonana ny Filankevitra Mpanao Lalàna Palestiniàna noho ny fisamantsamahana ara-politika, nanararaotra ny fahefàny mamoaka lalàna ny filoha Mahmoud Abbas, izay raha araka ny lalàna fototra ao Palestina dia mamela azy hankatò lalàna raha toa fotsiny ka misy ny hamehana (raharaha maika).
Ilay lalàna vaovao dia mifehy ny fandraharahàna ety anaty aterineto, ireo tranonkalam-baovao sy tambajotra sosialy, amin'ny fanipihana endrika “heloka an-tserasera” maromaro izay mety hahavoasazy hatramin'ny 15 taona am-ponja na asa an-terivozona mandra-pahafaty. Raha toa izy io mitanisa heloka an-tserasera vitsivitsy izay azo iadiana amin'ny fomba rehetra, toy ny sazy mihantona, ny fandosirana hetra, ary ny fangalarana ny mombamomba ny olona iray, dia omen'izy io fahafahana tsy misy fetra ihany koa ny biraon'ny fampanoavana ho afaka hitsikilo ny olompirenena Palestiniana, hipaingotra ny fifandraisany ety anaty aterineto, ary hisambotra azy ireny noho ny fanehoany ety anaty aterineto ny heviny sy ny fomba fijeriny politika.
Social Media Exchange (SMEX), izay mitazona angon-drakitra iray momba ny lalàna mahakasika ny zo dizitaly any amin'ny tontolo Arabo, dia nanasongadina tao anaty fanambaràna iray ny telo amin'ireo andininy faran'izay tena mampisy olana ao anatin'ilay lalàna, manohintohina ny fahalalahana maneho hevitra an-tserasera sy ny zo sivily ary politika:
Andininy 51 ao anatin'ilay lalàna milaza hoe, “raha misy heloka an-tserasera iray nitranga ka manohintohina ny ‘filaminam-pirenena’ na ny ‘firindran'ny fiainam-piarahamonina’, dia ho azo saziana “amin'ny fampiasàna an-terivozona, manomboka amin'ny telo ka hatramin'ny 15 taona, sazy mihatra amin'ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fahatanterahan'ilay heloka.
Andininy 32 manery ireo mpanome tolotra aterineto hiaraka hiasa amin'ireo masoivohon'ny mpitandro filaminana amin'ny fanangonana, fitahirizana ary fizaràna ny angondrakitra mombamomba ireo mpampiasa, raha kely indrindra mandritra ny telo taona, ary fanampiny dia ny fisakànana izay rehetra tranonkala naharaisana didim-pitsaràna.
Andininy 40 manome alàlana ny Lehiben'ny Fampanoavana na iray amin'ireo mpanampy azy hangataka amin'ny fitsaràna hamoaka didy ao anatin'ny 24 ora hanakanana tranonkala.
Na izany aza, tsy mifarana eto ny loza mitatao aterak'ilay lalàna momba ny heloka an-tserasera. Ireo andininy hafa tena ahitàna famoretana dia misy ny:
Andininy 16 milaza fa na iza na iza manitsakitsaka ireo “fomban'ny rehetra” ao amin'ny aterineto dia mety hifonja herintaona, na handoa sazy ara-bola 7.000 dolara amerikàna, na izy roa mitambatra.
Andininy 20 manasazy ihany koa izay rehetra mpampiasa aterineto manana na mitantana tranonkala mamoaka “vaovao manohintohina ny filaminam-panjakana, ny filaminam-bahoaka ao anatiny, ny filaminana anatiny sy ivelany”. Na iza na iza mizara ireny vaovao ireny dia mety hifonja herintaona na handoa sazy ara-bola hatramin'ny 1.400 dolara amerikàna.
Andininy 31 manao ho heloka izay rehetra andrana handingànana ny fibahanana tranonkala, na fampiasàna rafitra na fampiasa iray hidirana aminà tranonkala iray nobahanana.
Andininy 35 manery ny fitsaràna hanome ny biraon'ny Fampanoavana ny zo ho afaka hanara-maso na handrakitra ireo fifandraisana ety anaty aterineto, hatramin'ny fakàna ireo torohay fidirana aminy raha heveriny fa ilaina amin'ny fanadihadiana.
Miaraka amin'ireny filazàna ireny, izay manondro ny lanjan'ny “firindran'ny fiainam-piarahamonina”, “ny fanaon'ny olona”, “ny filaminam-panjakàna”, ary ny “filaminam-bahoaka”, ireo fomba fiteny mivelatra be sy voafaritra ao amin'ilay lalàna dia mety hahatonga ireo Palestiniàna mpampiasa aterineto, indrindra fa ireo mpikatroka sy ireo mpanao gazety, harefo manoloana ny fanenjehana ataon'ny Manampahefana Palestiniana (PA) izay afaka mandika azy ireny amin'ny fiteny tiany handikàna azy.
Ankoatra izay, ny fampiharana ity lalàna ity dia mitatra hatrany ivelan'ny valan'ny rafi-pitsaràna iadidian'ny Manampahefana Palestiniàna ary manome fahafahana hanenjika ireo Palestiniana monina any ivelany raha toa izy ireny nanao “heloha an-tserasera” araka ny famaritana ao anatin'ilay lalàna. Loza manambana io ho an'ireo Palestiniana mpikatroka politika monina any ivelany nefa toavin-teny be eny anaty media sosialy ao an-toerana. Tsy soritan'ilay lalàna raha toa ireo manampahefana ka mety hikatsaka ny fampodiana ireo Palestiniana monina any ivelany noho ny nanaovan'izy ireny heloka an-tserasera.
Tanaty fanitsakitsahana maro samihafa ny zo dizitaly Palestiniàna sy ny fahalalahan'ny media vitan'ny Manampahefàna Palestiniàna no nankatoàvana ilay lalàna. Mousa Rimawi, talen'ny Ivontoerana Palestiniàna ho Fampandrosoana sy Fanalalahana ny Asa an-Gazety izay nandrakitra ny karazana fanitsakitsahana tahàka izany dia nanamarika fa ny Jona tamin'ity taona ity, nihoatra lavitra ny fanitsakitsahana vitan'ny tafika mpanani-bohitr'i Israely ny fanitsakitsahana vitan'ny PA izay tomponandraikitra tamin'ny fanafihana sy fisamborana ireo mpanao gazety nanatontosa ny asany tany Amoron'i Jordàna. Ny tranga farany indrindra tamin'ny fanitsakitsahan'ny PA ny fahalalahana ety anaty aterineto dia ahitàna ny fisamborana mpanao gazety maro tany Amoron'i Jordàna noho ny zavatra nosoratan'izy ireo tao amin'ny Facebook, ary ny fibahanana tranonkalam-baovao efa ho maherin'ny 20 izay an'ireo mpanao politika mpifanandrina aminy sy mpanakiana azy.